တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Senior Lieutenant General Tran Don အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Senior Lieutenant General Tran Don အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၉
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Senior Lieutenant General Tran Don အား ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကုန္းျမင့္သာရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္ ၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာႏွင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ ႀကီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong၊ စစ္သံမွဴးႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ ၾက သည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ မည့္အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအျပန္ အလွန္လည္ပတ္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အားကစားအဖြဲ႕မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားအျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ စစ္ဘက္ေဆးပညာရပ္မ်ားအျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အားရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ႔သည္အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၿပီး စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့ တပ်မတော် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Senior Lieutenant General Tran Don အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကုန်းမြင့်သာရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင် ၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစောနှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ် ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong၊ စစ်သံမှူးနှင့် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများတက်ရောက် ကြ သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ဗီယက်နမ်နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု အခြေအနေများနှင့် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက် မည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင် များ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များအပြန် အလှန်လည်ပတ်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အားကစားအဖွဲ့များ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေး၊ စစ်ဘက်ဆေးပညာရပ်များအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့ တပ်မတော်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးတို့သည်အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့သားကောင်းစစ်မှု ထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (လေးထောင့်ကန်)အနီးရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ဇာတိမာန်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် အမှတ်(၁)စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးရပ်ကွက် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပညာရည်မြင့်မားရေးသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မြန်မာ့သိုင်းပြိုင်ပွဲဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား တက်ရောက်၊ တပ်မတော်အားကစားနှင့် ကာယပညာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်အားကစားကော်မတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အတွင်းရေးမှူးများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား၊ မြန်မာ့သိုင်းအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သိုင်းဆရာကြီးများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဇန်နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း (ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉ Admin 0